Uchino Bath Towel | Buy online | SHOP.COM.MM
အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အ၀ါရောင်
အပြင်မှာလဲ ဒီဈေး အွန်လိုင်းပေါ်မှာလဲ ဒီဈေး ဆိုတော့ taxi ခနဲ့ တန်ပါတယ်
Uchino ကိုသုံးနေကျဆိုတော့ ခုတော့ အွန်လိုင်းကနေပဲ ၀ယ်လိုက်တော့တယ် Read more Hide
ပိတ်သားလေး အရမ်း နူးညံ့ပြီး ရေစုပ်အား ကောင်းတယ်။
အတော်လေး သဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
အရောင်လေးတွေ အရမ်းလှတယ်။ ကြာရှည်ခံပြီး အမွေးတွေထွက်လာတာ ပြဲလာတာမရှိဘူး။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ နူးနူးညံ့ညံ့လဲရှိတယ်။ Read more Hide
Uchino Bath Towels
By usingasoft material, Uchino Bath Towels will make you feel refresh and smooth as you step out of your shower, hugging your skin with its soft touch. Laundry washable and pile, low-rebound urethane, antibacterial processing.
Specifications of Bath Towel